DAAWO: DF Soomaaliya oo dib usoo ceshatay Gaadiid dagaal & Askar shalay galab sheegay in ay ka goosteen
May 3, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 0
MUQDISHO(P-TIMES) – Sida ay tilmaamayaan warar laga helayo laamaha Amniga ee Dawladda Faderaalka Soomaaliya, gaar ahaana taliska ciidamada gaarka ah ee Haramcad iyo Booliska ayaa sheegaya in ay dib u soo ceshadeen gaadiid dagaal oo shalay galab Taliye kuxigeenkii ciidanka Haramcad uu ula galay ciidamada Mucaradka ee kusugan magaalada Muqdisho.
Taliska Haramcad ayaa sheegay in aysan Askartii raacday ama Ilaalada u ahayd Taliye kuxigeenka ogeyn qorshaha rasmiga ah ee laga leeyahay arrintan, balse markii ay garowsadeen xaqiiqada ay dib u soo laabteen.
Taliska booliska gobalka Banaadir ayaa sheegay in ay dadaal badan ku bixinayaan sidii dib ciidamadu ugu laaban lahaayeen xarumahooda, waxayna dhaliileen habdhaqanka xubnaha mucaaradka qaarkood.
Shalay galab ayay markii ciidamo katirsana Haramcad ay sheegen in ay ku biireen mucaradka taas oo ay soo tabiyeen mudanayaal katirsan baarlamaanka Faderaalka.
Saraakiisha Amniga ayaa ka digay ficilo ay sheegeen in lagu kala dhantaalayo laamaha Amniga ee ciidamada dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxayna tilmaameen in ay ficiladas yihiin kuwa looga soo horjeeda dibu dhiska ciidanka, ee aysan aheyn kuwa mucaaradnimo siyaasadeed la xariira.
Sida ay tilmaamayan xogaha laga helayo magaalada Muqdisho, Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa bilaabay la kulmida musharaxiinta mucaaradka ee shalay soo dhaweeyey talaabadii Madaxweynah JFS ugu wareejiyey Amniga dalka iyo howlaha Doorashooyinka.
Mr, Rooble ayaa wararku sheegayaan in uu la kulmayo culeyso uga imanaya xubno ay horey saaxiibo u ahaayeen ka hor arrimaha siyaasadda inta uusan soo galin, kuwaas oo hadda qorshihiisa doorashada Amnigeda u arkaya halis weyn.
Raysalwasaaraha ayaa habeen kahor amray in ciidamadu dib ugu labtaan saldhigyadooda, waxayna taasi ku noqotay rajo beel xubno katirsan mucaaradka oo u arkaya qorshe halis ku ah doonistooda iyo xataa in ay dib u adeegsadaan ciidamada hubeysan.
Midowga xubno kaid ah ayaa qaba in ciidamadan ay sidooda u joogaan gudaha Muqdisho, iyagoo u abaabulan in ay kasoo horjeedaan ciidan kale, taas ayaa loo arkayaa in ay ka dhigan tahay sugida natiijada dambe ee doorashada Madaxweynaha, oo aan xiliga ay dhacayso aan la aqoonin.
Raysalwasaaraha ayaa la kulmay caawa Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo ay isla qaateen in loo baahan yahay in ciidamada dib loo mideeyo, lagana dhex-saaro arrimaha siyaasadda, wuxuuna u sheegay mucaaradka in uu isagu maamulayo howlaha Amniga oo ay shaqadiisa tahay.
Mucaaradka qaarkood ayuu sheegay in ay doonayaan in ay magaalada kusiiyaan dagaalada iyo ficilada dadweynaha barakaca u keenaya, taas oo uu sheegay in loo baahan yahay in wadajir looga hortago oo uusan aqbali doonin.